केन्द्रीय बैंकले ल्यायो पुनःकर्जा कार्यविधि - Deshko News Deshko News केन्द्रीय बैंकले ल्यायो पुनःकर्जा कार्यविधि - Deshko News
काठमाडौं, जेठ २०
नेपाल राष्ट्र बैंकले साना, लघु र घरेलु साना उद्यमका लागि रु १५ लाखसम्मको पुनःकर्जा दिन सकिने प्रावधानसहितको पुनःकर्जा कार्यविधि, २०७७ ल्याएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै उद्यम व्यवसायलाई प्रभावकारीरूपमा पुनः अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।
बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनःकर्जा लिन सकिने गरी प्रबन्ध गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि केन्द्रीय बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशत ब्याज लिएर त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस्तै विशेष पुनःकर्जामा राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतमा रकम दिनेछ । सो रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन प्रतिशत ब्याज लिन सक्नेछन् । साधारण पुनःकर्जामा राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिनेछ । त्यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर लगानी गर्न पाउनेछन् ।
पुनःकर्जा कोषको सीमा सञ्चालक समितिले समय निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रतिग्राहक रु १५ लाखसम्मको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनःकर्जा, रु १० करोडसम्मका विशेष पुनःकर्जा र साधारण पुनःकर्जा इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थालाई एकमुष्टरूपमा प्रदान गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समय तोकेर कर्जाका लागि आह्वान गर्नेछ । तोकिएको कागजातसहित ग्राहकले बैंकका सम्बन्धित शाखामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र उक्त पुनःकर्र्जासम्बन्धी निर्णय गरिनेछ । बैंकका प्रतिशाखा पाँच ग्राहकले मात्रै त्यस्तो कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको वा विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औषतमा प्रतिवर्ष पूँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायले भने त्यस्तो कर्जा पाउने छैनन् । चुरोट, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सूर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जासमेत अयोग्य हुनेछ ।
डिम्याट खोल्नेको सङ्ख्या ३३ लाख नजिक
काठमाडाैँ, चैत्र ३डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ३३ लाख नजिक पुुगेको छ । पछिल्लो समय निरन्तर
माछापुच्छ्रे बैंकले मोबाईल वालेट शुभारम्भ गर्दै
काठमाडौं, माघ २८नेपाली कर्मशियल बैंकिङ्ग इतिहासमा नै पहिलो पटक माछापुच्छ्रे बैंक लि. ले आफ्नै मोवाईल
माछापुच्छ्रे बैंक लि.र सरफ एक्सचेन्जबीच सम्झौता
काठमाडौं, माघ २८माछापुच्छ्रे बैंक लि.ले दुवईमा रहेका नेपालीहरुमाझ आफ्नो सेवालाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा
सेञ्चुरी बैंकको नवौ तथा दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं, पुस २९सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नवौ तथा दशौं वार्षिक साधारण सभा बुधबार सम्पन्न भएको
गैरआवासीय नेपालीद्वारा ५६० थान अस्किजन सिलिण्डर सहयोग, आजै नेपाल पुग्दै
काठमाडौं, जेठ १ नेपालमा कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजन अभावको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ,
सुपर लिगको उपाधिका लागि काठमाडौं र धनगढी मैदानमा उत्रिँदै
काठमाडौं, जेठ १ काठमाडौंमा जारी नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) फुटबलको उपाधिका लागि काठमाडौं रेजर्स र
सरकारले सिफारिस गर्याे ११ देशका लागि राजदूत, कुन देशमा को ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, जेठ १सरकारले ११ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । केही दिन